'IZINTO ENGAQHELEKANGA' ZABANTWANA KUNYE NOJAMES CORDEN COVER COVER CLASS MOTOWN - CALEB MCLAUGHLIN
Ukuba Izinto Engaqhelekanga zaBantwana zingayeka ukuba ziLunge kakhulu kuyo yonke into, ukuzithemba kwam kuya kuyixabisa
Ngaba udiniwe kukuva malunga nesamente ye Izinto ezingaqhelekanga okwangoku? Kulungile, uxolo, kukho ngaphezulu! Sele ziziiveki ezimbini okoko iXesha lesi-2 liphumile, kwaye abalingisi bebehamba bengayeki ngohambo lwabo lokukhuthaza. Kodwa okoko nje aba bantwana beqhubeka nokumangalisa esidlangalaleni, siza kukuxelela ngayo. Ngokukodwa xa kubandakanya ukucula kunye nokudanisa okulula.
U-Batman uyinkosazana ye-disney
Ungasele uyazi ukuba uninzi lweefayile ze- Izinto ezingaqhelekanga abantwana bavela kwimvelaphi ebanzi. Ukuba akukhange kubenjalo, nceda undivumele ndijongise kuGaten Matarazzo (Dustin) owenza into ebonakala ngathi injalo Iseti Ikaraoke yomhla wokuzalwa.
UCaleb McLaughlin (uLucas) udlale uSimba INgonyama yeNgonyama kwiBroadway.
Inkqubo yokulinganisa entsha ye-netflix
USadie Sink wadlala indima yesihloko kwi UAnnie kwiBroadway , ngelixa uFinn Wolfhard kunjalo ngokusisiseko i-rockstar encinci kwaye njengoko sonke sisazi, uMillie Bobby Brown ulungile iyamangalisa ngandlela zonke .
Konke oku kuthetha ukuba indlela amakhwenkwe esikhonkwane ngayo uMotown medley noJames Corden kwividiyo ephezulu ayothusi – ayiloxesha lokuqala ukuba abantwana bacule kunye; ukuba, ngombulelo, kwenzeka nge maxesha athile -Kodwa isamangalisa.
Ividiyo ivula kancinci malunga neCorden yokuya esikolweni nabantwana (wabanjwa iminyaka eliqela), kwaye baseka iqela elikwiMotown kunye, i-Upside Downs. Ngaba umdaniso wabo uhamba kancinci ngaphandle kokuvumelanisa? Ewe, ngokuqinisekileyo, kwaye andikhathali ngokupheleleyo. Kuyathandeka kwaye kugqibelele kwaye akukho nto bangenako ukuyenza. Ingacaphukisa ukuba ibingenamtsalane kangako.
wow ebomvu ihempe mfo npc
Ubomi Bomntu Omnyama
igosa eliphosakeleyo kunye no-mr truffles
Iitweets ezihlekisayo malunga ne-barron trump
I-scooby doo yokufumana ibali ubunzima
baphulukana noko bakufelayo
Ukuhamba utolo olufileyo kwiliso
diana inkosana kunye no-steve trevor